ပြည်မြို့ကြီးရဲ့ ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ဆောင်ခဲ့သူ THE VOICE MYANMAR SEASON (3) WINNER ဆုရှင် N OO L ရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကား – Cele Oscar
ပြည်မြို့ကြီးရဲ့ ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ဆောင်ခဲ့သူ THE VOICE MYANMAR SEASON (3) WINNER ဆုရှင် N OO L ရဲ့ဝမ်းသာပီတိစကား
December 21, 2020 By L YC Celebrity
ပရိသတ်ကြီးရေ.. အပတ်စဉ် တနင်္ဂနွေနေ့ တိုင်း ရင်ခုန် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းများစွာ နဲ့ စောင့်ကြည့်အားပေးခဲ့ရတဲ့ The Voice Myanmar Season (3) သီချင်းဆိုပြိုင်ပွဲ ကြီးကတော့ အောင်မြင်စွာနဲ့ ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ The Voice Myanmar Season (3) ရဲ့ နောက်ဆုံး Winner ဆုကြီး ကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ သူကတော့ Team RZN ရဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင် N Oo L ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ N Oo L ကတော့ Winner ဆုကြီး ရရှိခဲ့တဲ့အပေါ် သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ အခုလိုပဲ ဝမ်းသာပီတိ စကားပြောလာတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
“ဒါအိမ်မက်ပါပဲ။ ဒီအိမ်မက်မက်ခွင့်ပေးတဲ့ တစ်ဦးချင်းစီ တိုင်းကို ကျေးဇူးတင် တန်ဖိုးထားမဆုံးပါဘူး။ ပထမဦးစွာ ကျွန်တော့်ကို အမြဲယုံကြည်ပေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Coach အစ်ကို ကိုR ကြီးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ❤️❤️🙏🏻🙏🏻 ကျွန်တော့်မိသားစု ကျွန်တော့် ဇာတိပြည်မြို့နဲ့ ဒီပြိုင်ပွဲအားဖြင့် ကျွန်တော်နဲ့ ရင်နှီးခဲ့ကြတဲ့ ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေ အကုန်လုံးကို ရင်ထဲကကျေးဇူးပါခင်ဗျာ”
“ကျွန်တော်တို့လို အပ်သမျှကို အမြဲ လိုလေသေးမရှိဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ the voice myanmar ဝိုင်းတော်သား အားလုံးနဲ့အမြဲစေတနာအပြည့်နဲ့တီးခတ်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ lucky hand band…အမြဲ မိတ်ကပ် နဲ့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Hello ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻ကျေးဇူးတင် ထိုက်သူအားလုံးကို ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ။ ရှေ့လျှောက်အနုပညာ နဲ့ ပတ်သတ်ရင် ကျွန်တော့်ကို စိတ်မပျက်စေရဘူးလို့ကတိပေးပါတယ်။ ဒီနေရာကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကို နှလုံးသားထဲက ကျေးဇူးအထူးတင်ရင်း…. .❤️❤️” ဆိုပြီး ကျေးဇူးတင် စကားပြောလာခဲ့ပါတယ်။
ပြည်မြို့ သား N Oo L ကတော့ The Voice Myanmar Winner ဆုကြီးကိုပိုက်ပြီး Team RZN နဲ့ ပြည်မြို့ရဲ့ဂုဏ်ကိုဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ N Oo L တစ်ယောက် ရှေ့ဆက်လျှောက်မယ့် အနုပညာလမ်းမ မှာလည်း အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီးရရှိပြီး ပရိသတ်ချစ်သော အဆိုတော်ကြီး တစ်ယောက်ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
Source: N Oo L ‘s fb
ပရိသတျကွီးရေ.. အပတျစဉျ တနင်ျဂနှနေေ့ တိုငျး ရငျခုနျ စိတျလှုပျရှားခွငျးမြားစှာ နဲ့ စောငျ့ကွညျ့အားပေးခဲ့ရတဲ့ The Voice Myanmar Season (3) သီခငျြးဆိုပွိုငျပှဲ ကွီးကတော့ အောငျမွငျစှာနဲ့ ပွီးဆုံးသှားခဲ့ပွီ ဖွဈပါတယျ။ The Voice Myanmar Season (3) ရဲ့ နောကျဆုံး Winner ဆုကွီး ကို သိမျးပိုကျနိုငျခဲ့ သူကတော့ Team RZN ရဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျ N Oo L ပဲ ဖွဈပါတယျ။ N Oo L ကတော့ Winner ဆုကွီး ရရှိခဲ့တဲ့အပျေါ သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျစာမကျြနှာကနေ အခုလိုပဲ ဝမျးသာပီတိ စကားပွောလာတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
“ဒါအိမျမကျပါပဲ။ ဒီအိမျမကျမကျခှငျ့ပေးတဲ့ တဈဦးခငျြးစီ တိုငျးကို ကြေးဇူးတငျ တနျဖိုးထားမဆုံးပါဘူး။ ပထမဦးစှာ ကြှနျတေျာ့ကို အမွဲယုံကွညျပေးခဲ့တဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ Coach အဈကို ကိုR ကွီးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျခငျဗြာ❤️❤️🙏🏻🙏🏻 ကြှနျတေျာ့မိသားစု ကြှနျတေျာ့ ဇာတိပွညျမွို့နဲ့ ဒီပွိုငျပှဲအားဖွငျ့ ကြှနျတျောနဲ့ ရငျနှီးခဲ့ကွတဲ့ ညီအဈကိုမောငျနှမတှေ အကုနျလုံးကို ရငျထဲကကြေးဇူးပါခငျဗြာ”
“ကြှနျတျောတို့လို အပျသမြှကို အမွဲ လိုလသေေးမရှိဖွညျ့ဆညျးပေးတဲ့ ခဈြစရာကောငျးတဲ့ the voice myanmar ဝိုငျးတျောသား အားလုံးနဲ့အမွဲစတေနာအပွညျ့နဲ့တီးခတျပံ့ပိုးပေးတဲ့ lucky hand band…အမွဲ မိတျကပျ နဲ့ ပံ့ပိုးပေးတဲ့ Hello ကိုလညျးကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျခငျဗြာ❤️❤️🙏🏻🙏🏻🙏🏻ကြေးဇူးတငျ ထိုကျသူအားလုံးကို ကြေးဇူးအမြားကွီးတငျပါတယျခငျဗြာ ။ ရှလြေှ့ောကျအနုပညာ နဲ့ ပတျသတျရငျ ကြှနျတေျာ့ကို စိတျမပကျြစရေဘူးလို့ကတိပေးပါတယျ။ ဒီနရောကို ပို့ပေးခဲ့တဲ့သူအားလုံးကို နှလုံးသားထဲက ကြေးဇူးအထူးတငျရငျး…. .❤️❤️” ဆိုပွီး ကြေးဇူးတငျ စကားပွောလာခဲ့ပါတယျ။
ပွညျမွို့ သား N Oo L ကတော့ The Voice Myanmar Winner ဆုကွီးကိုပိုကျပွီး Team RZN နဲ့ ပွညျမွို့ရဲ့ဂုဏျကိုဆောငျနိုငျခဲ့ပွီပဲ ဖွဈပါတယျ။ N Oo L တဈယောကျ ရှဆေ့ကျလြှောကျမယျ့ အနုပညာလမျးမ မှာလညျး အောငျမွငျမှုတှေ အမြားကွီးရရှိပွီး ပရိသတျခဈြသော အဆိုတျောကွီး တဈယောကျဖွဈပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ဖတျရှုပေးကွတဲ့ Cele Connections ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။
ညီမငယ် နိုင်ဖြိုးဥရဲ့ မွေးနေ့ပွဲကို မိသားစုစုံစုံလင်လင် ကျင်းပခဲ့လို့ ပျှော်ရွှင်နေတဲ့ ပိုင်ဖြိုးသု
ကားတွေကော ကွန်ဒိုတိုက်ခန်းတွေကောဝယ်ထားပေးတဲ့အပြင် မိဘကို တစ်လကို သိန်း(၃၀) ပေးထားတဲ့ မြင့်မြတ်အကြောင်းပြောလာတဲ့ ဂျူးဂျူးပန်ထွာ